Mampitodika any Amin’ny Zanakalahy ny Fandraràna ilay Horonantsary “Zanakavavin’i India”? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Marsa 2015 2:42 GMT
Vakio amin'ny teny 繁體中文, čeština , srpski, Español, Български, English
Nipoaka indray ny adihevitra manodidina ny resaka fanolanana ao India, noho ilay horonantsary fanadihadiana ‘India's Daughter (Zanakavavin'i India)‘ notontosain'ilay britanika mpamokatra horonantsarimihetsika Lesley Udwin mikasika ny fanolanana tambambe feno herisetra niafara tamin'ny famonoana ilay mpianatra ho mpitsabo Jyoti Singh Pandey tamin'ny taona 2012 tao Delhi.
Na dia tsy mbola navoaka akory aza dia efa niatrika fiampangana ho mapiseho ny endrika ratsin'i India ny horonantsary, fa natao tamin'ny tsiro matsatso izany na niresaka an-kasahiana ilay olana. Niantso izany ho hosoka mihitsy aza ny sasany
Niditra an-tsehatra ny Antokon'ny fitondrana ao amin'ny elatra havanana Bharatheeya Janata notarihin'ny Praiminisitra Narendra Modi ary nahazo didim-pitsarana mandràra ny famoahana azy ao India noho ny filazana fa “tsy azo ekena ny vontoaty”. Tany am-boalohany, nikasa hamoaka an-kalamanjana ny horonantsary fanadihadiana nandritra ny andro iraisam-pirenena hoan'ny vehivavy tamin'ny 8 Martsa ny BBC saingy nampandroso ny famoahana azy tamin'ny 4 Martsa indray ary namoaka ny horonantsary manontolo tao amin'ny YouTube. Nangataka avy eo ny governemanta Indiana mba hakaton'ny YouTube ny fidirana amin'ny horonantsary ao amin'ny firenena, ary nanaiky ny habaka.
Olana tokoa ao India ny heloka mihatra amin'ny vehivavy. Araka ny filazan'ny Biraon'ny Fandraketana Ny Heloka Bevava ao amin'ny firenena (National Crime Record Bureau), vehivavy iray no voaolana ao India isaky ny 20 minitra. Hatramin'ny 2010, niakatra 7,1 isanjato ny heloka bevava voalaza fa nihatra tamin'ny vehivavy.
Mandritra izany fotoana izany, tsy tonga lafatra ilay horonantsary. Nanamarika ireo madilana fototra tsy ampy tamin'ny fitantarana ao amin'ny horonantsary tao amin'ny tranokalam-baovao Quartz ny mpikambana iray ato amin'ny GV Annalisa Merilli:
Raha notopaza-maso ny tahan'ny fanamelohana noho ny fanolanana, dia mitsangana am-pireharehana amin'ny isanjato “mahatalanjona” 24,2 (2012) i India raha oharina amin'ny Angletera 7 isanjato sy Soeda 10 isanjato. Koa nahoana no mbola mitoetra ho olana ny fanolanana?
Miranirany ny tsy fitovian-jon'ny lahy sy ny vavy ao India, araka ny nosorotan'i Anjali Joshi tao amin'ny Huffington Post: “Tsy misy ny aretina lalina fanomezan-tsiny ny niharam-boina. Novolena tao amin'ny kolontsaina Indiana izany fomba fisainana izany noho ny vokatry elanelana teo amin'ny lahy sy ny vavy nandritra ny fiainan-taranaka maro. Tsy “voankazo lò ao amin'ny barika” ireo mpanolana ireo, fa tsy lavitry ny fenitra ara-kolontsaina ao India ny fomba fisainan'izy ireo.”